महाराष्ट्रमा बदला लिन बाँदरले मारे २०० कुकुर, के हो वास्तविकता ?
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ पुष ७, बुधबार ०९:३४
भारतको महाराष्ट्रस्थित मराठवाडाको माजलगाउँ तहसीलको लवुल गाउँ पछिल्लो एक सातादेखि चर्चामा छ । यो चर्चाको कारण यहाँ बाँदर र कुकुरबीचको द्वन्द्वको खबर हो ।
यो समाचारलाई लिएर सञ्चारमाध्यमहरुले विभिन्न दाबी गरेका छन् । धेरै मिडिया प्रकाशनहरूले पनि दावी गरे कि बाँदरहरूले २०० कुकुर मारे। तर, जब हामी गाउँमा गएर यी दावीहरूको सत्यता जाँच गरे, अर्को तस्विर देखा पर्‍यो।
लावुल मराठवाडाको बीड जिल्लाको माजलगाउँ तहसीलबाट पाँचदेखि सात किलोमिटर टाढा अवस्थित एउटा गाउँ हो। सन् १९८० मा गाउँ नजिकैबाट बग्ने खोलामा बाँध बनाउने प्रयासले सिंगो गाउँ डुबानमा परेको थियो । पछि यो गाउँ पुनर्वास र बसाइयो जसलाई लवुल नम्बर १ गाउँ भनिन्छ।
यस गाउँको जनसङ्ख्या पाँच हजारभन्दा बढी छ भने गाउँको क्षेत्रफल पनि ठूलो छ । गाउँमा विद्यालय, बैंक र अन्य आधारभूत सुविधाहरू छन्। मजलगाउँ बाँधको ब्याकवाटरका कारण खेतीपातीका लागि प्रशस्त पानी छ भने उखु खेती पनि फस्टाउँदै गएको छ ।
यो गाउँ बीड जिल्लाको धनी गाउँमा गनिन्छ । गाउँको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो कारण उखु उत्पादन हो तर एउटै सिक्काका दुई पाटा छन् । उखु उत्पादक धनी छन् तर उखु उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था निकै दयनीय छ ।
बाटोमा बाँदर र कुकुरबीचको द्वन्द्वको रहस्य थाहा पाउन लवुल गाउँ पुग्यौं । दैनिक जीवनमा जस्तै गाउँको ठूलो जनसंख्या आफ्नो व्यापारमा व्यस्त थियो। गाउँमा पसेपछि अलि टाढा रहेको लवुल ग्राम पञ्चायतको कार्यालयमा पुगेर घटनाबारे जान्न खोज्यौँ ।
त्यसबेला कार्यालयमा ग्राम पञ्चायतका सदस्य र अन्य कर्मचारी उपस्थित थिए । यसबाहेक त्यहाँ आ–आफ्नो कामको सिलसिलामा आउने सर्वसाधारण पनि थिए । हामीले यी व्यक्तिहरूबाट जान्न चाहन्थ्यौं कि यो पूरै के हो ? यसपछि उनीहरुले यो घटनाको बारेमा विस्तारै बताउन थाले ।
बाँदर आयो र…
यो खबर गत साता मात्रै देश र विश्वका सञ्चारमाध्यममा हेडलाइनमा आए पनि लवुल गाउँका बासिन्दाका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा यो संघर्ष सुरु भएको हो । सेप्टेम्बरको सुरुमा लवुल गाउँमा दुई बाँदर आए।
गाउँ पञ्चायत समितिका सदस्य रवीन्द्र सिन्देले भने, ‘गाउँमा बाँदर धेरै छैनन्, कहिलेकाहीँ आउने गर्थे तर खासै वास्ता गर्दैनन्, तर यसपटक बाँदर आएपछि गाउँमा अनौठो घटना देखिएको छ ।’
यी बाँदरहरूले कुकुरको बच्चालाई उठाए र रूख वा अग्लो घरहरूमा लगे। सुरुमा गाउँलेहरूले धेरै बुझेनन् तर पछि बाँदरहरू बिस्तारै कुकुरलाई लिएर भागिरहेको देखे ।
त्यसपछि के भयो…
बाँदरले रुख वा अग्लो घरमा लगेका केही कुकुरहरू माथिबाट खसेर मरे। यहीँबाट बाँदरले कुकुरलाई मारेको हल्ला फैलियो र यो कुरा फैलियो ।
यसपछि धेरै कुरा फैलिन थाल्यो जस्तै कि बाँदरले कसैलाई खेदे वा बाँदर कसैको अगाडिबाट गयो भने त्यो व्यक्ति एक्कासी लड्यो र घाइते भयो।
यस्तै एउटा घटना सीताराम नाइबलसँग भएको छ । उनीहरु कुकुर उतार्न छतमा चढेका थिए । अचानक बाँदर आएपछि उनीहरु डरले हाम फालेर घाइते भएका थिए ।
उक्त दुर्घटनामा नायबलको दुवै खुट्टा भाँचिएको थियो भने दुवै खुट्टामा रड हाल्नुपरेको थियो । उपचारमा करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । तीन महिना बितिसक्दा पनि उनीहरु थोरै समय बिस्तारै हिँड्न सक्छन् ।
धेरै पटक मानिसहरूले बाँदरले बच्चाहरूलाई खेदेको कुरा पनि सुनेका थिए। त्यसपछि मानिसहरूले आफ्नो घर भित्रबाट ताल्चा लगाउन थाले र यो कुरा ग्राम पञ्चायतमा पनि पुग्यो।
सुरुमा वन विभागले बेवास्ता गर्यो
गाउँमा त्रास छायो । त्यसैले ग्राम पञ्चायतले वन विभागमा उजुरी दर्ता गरेर सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । गाउँ विकास अधिकृत नानासाहेब शेल्केले भने, ‘यस सम्बन्धमा मैले भदौ १२–१३ मा वन विभागलाई पत्राचार गरेको थिएँ तर कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
फेरि पत्राचार गरेपछि त्यसको पनि वास्ता भएन । गाउँका विवाद समाधान समितिका अध्यक्ष राधाकिशन सोनवणेले भने, ‘वन विभागले एक–दुई पटक टोली पठाए पनि गाउँलेहरूले लगातार मुद्दा उठाएपछि निरीक्षण गरेर मात्रै छाडे ।’
त्यसपछि अन्ततः मिडियाको सहयोग लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रचार र चर्चा भएपछि तत्काल कारबाही गरिएको गाउँलेले बताए ।
कुकुरको मद्दतले बाँदर समातियो
सञ्चारमाध्यममा धेरै चर्चा भएपछि अन्ततः धारुर वन विभागले आफ्नो टोलीलाई नागपुरमा सम्पर्क गरी बाँदरलाई बोलायो । यसपछि १९ डिसेम्बरमा नागपुरको टोलीले जाल बिछ्याएर बाँदरलाई पक्रेको थियो । जब बाँदरले कुकुरको बच्चा उठाउँदै थिए, बाँदरलाई बोलाउन एउटा कुकुरलाई खोरमा राखियो।
वडवानीका वन अधिकारी डीएस मोरेले भने, ‘यी बाँदरहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक बासस्थान अर्थात् जंगलमा छोडियो।’
‘कुकुरको लगातार मृत्यु’
मिडियामा आएका समाचारका कारण यो विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण भएको थियो तर कुकुरको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएपछि यस अवधिमा विभिन्न कुराहरु फैलिएका छन् ।
सुरुमा केही सञ्चारमाध्यममा यो संख्या १० देखि १५ रहेको बताइएको थियो र केही दिनमा यो धेरै गुणा बढ्यो । केही सञ्चारमाध्यमले बाँदरले २५० कुकुरलाई मारेको दाबी समेत गरेका छन् ।
तर, लभुल गाउँलेहरुले भने फरक दाबी गरेका छन् । कतिपयले ५० देखि ६० वटा कुकुरको मृत्यु भएको कुरा गरे, मानिसहरु पनि भेटिए जस अनुसार १०० भन्दा बढी कुकुर मरेको हुन्थ्यो भने कोहीले २०० कुकुरको मृत्यु भएको बताए ।
तर, कुराकानीका क्रममा गाउँका केही व्यक्तिले यसलाई बढाइचढाइ गरिएको र वास्तविकतामा ५० भन्दा कम कुकुरको मृत्यु भएको बताए । तर, यी सबै दाबीबाट कतिवटा कुकुरको मृत्यु भयो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । गाउँलेहरूले प्राप्त गरेको आधिकारिक आंकडा ५० र ६० बीच मात्र थियो।
तर, वन अधिकृत डीएस मोरेले यी सबै तथ्यांकलाई गलत बताएका छन् । उनले भने, ‘तीनदेखि चारवटा कुकुरको मृत्यु भएको हुनसक्छ।’
अफवाह फैलाउने कारण
मरेका कुकुरको संख्या बढ्दै गएपछि गाउँमा हल्ला फैलियो । यसमा धेरै किसिमका हल्ला चलेका थिए । यो सम्पूर्ण मामिला कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा धेरै हल्ला चल्यो ।
यस्तै एउटा हल्लाले पहिले नवजात बाँदरलाई कुकुरले मारे, त्यसपछि बाँदरले कुकुरको कुकुरलाई मार्न थाले र त्यसको लागि माथिबाट कुकुरलाई तल फाल्न थाले ।
गाउँका पञ्चायत सदस्य रविन्द्र शिन्देले भने, ‘नवजात बाँदरको मृत्यु भएपछि बाँदर बौलाहा भएको र आफ्नो बच्चा बनाएर कुकुरलाई लिएर भागिरहेको गाउँका केही मानिसले भनिरहेका थिए ।
‘केही कुकुरहरूलाई बचाइयो’
लक्ष्मण भगतले भने, ‘बालबालिकाहरू स्कुल जान डराउँछन्, घरका पुरुषहरू खेतमा जाँदैनन् र महिलाहरू कामका लागि घरबाट बाहिर निस्कँदैनथे।’
बाँदरहरू लक्ष्मण भगतको घरको छतमा धेरै दिन बसे । यस क्रममा उनीहरूले आठदेखि दशवटा कुकुरलाई टेरेसमा ल्याएका थिए।
लक्ष्मण भगतले भने, ‘रातमा बाँदरसँगै कुकुरको कुकुरको आवाज सुनिन्थ्यो, घरका साना केटाकेटीहरू डराउँथे तर हामीलाई भोकले कुकुरको कुकुर रोएको जस्तो लाग्यो। भोलिपल्टदेखि दुध र रोटी ल्यायो । टेरेसमा कुकुरहरू। यसलाई राख्नुहोस्।’
यसले केही कुकुरको ज्यान बचायो र आज भगतको घर अगाडि देखिएका छन् ।
किन गरे बाँदरले यस्तो ?
वन अधिकृत डीएस मोरेले पनि बाँदरले कुकुरलाई किन उठाएको बताए । उनका अनुसार ‘कुकुरको कपालमा साना–साना जुम्रा, पिसाब हुन्छन् र बाँदरले खाने गर्छन् र कुकुरको पिला खानका लागि मात्रै उठाउँछन् ।
डीएस मोरेले भने, ‘ठूला कुकुरहरू सजिलै बाँदरको चपेटामा आउन सक्दैनन् । कुकुरहरू सजिलै समात्छन् र तिनीहरूले आफूलाई बचाउन पनि सक्दैनन्। जुँगा, पिसाब, बाँदरले कुकुरलाई खाएपछि रुखमा वा घरको छानामा छाडेर दुई–तीन दिनसम्म खाना वा पानी नपाएर कुकुर मर्न थाल्छन् । कुकुरहरू यति उचाइबाट तल आउन सक्दैनन् र केही कुकुरहरू तल ओर्लन खोज्दा मरेका हुन सक्छन्।’
के भन्छन् विज्ञहरु ?
औरंगाबादको सिद्धार्थ उद्यानको चिडियाखानामा विभिन्न प्रकारका जनावरहरू छन्। डा बीएस नायकवाडेले यहाँ लामो समय काम गरेका छन् । उनीहरुबाट बाँदरको व्यवहारबारे पनि जान्न खोज्यौँ ।
नायकवाडेले भने, ‘बाँदरले रिसाउनेलाई चोट पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा सत्य हो। बदला लिन क्रोधमा केही गर्न सक्छन्। तर, लवुल गाउँको बारेमा जे भनिएको छ, त्यो अतिशयोक्ति हो।’
जबकि लाइफ केयर एनिमल एसोसिएसनका अध्यक्ष धनराज सिन्देले अर्कै पक्ष औंल्याउछन् । उनका अनुसार बाँदर निकै जिज्ञासु प्राणी हो । सायद उसले जिज्ञासाका कारण यस्तो गरेको हो ।
‘अफवाहले द्वन्द्व बढाउँछ’
वन अधिकृत डीएस मोरेले भने, ‘बाँदरले गाउँमा कसैलाई आक्रमण गरेका छैनन् । बाँदरको आतंकका कारण केही दुर्घटना भए पनि बाँदरले आक्रमण गरेनन् ।
‘बाँदरहरूबीच झगडा भयो भने मानिसहरू डराउँछन् र बाँदरहरूलाई आक्रमण गर्छन्,’ मोरे भन्छन्। त्यसोभए बाँदरहरूले आत्मरक्षामा केही गर्नेछन्।
उनले फेरि बाँदर आक्रमणको चर्चा जनताले गर्ने तर यस्ता हल्लाले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउने बताए ।
लवुल गाउँमा तीन महिनादेखि चलिरहेको नाटक अन्ततः सकिएको छ । अहिले गाउँमा धेरै कुकुर देखिएका छन्, कतै कतै कुकुर पनि छन् तर अहिले यहाँ बाँदर छैनन् । उनीहरुलाई फेरि जंगलमा छाडिएको छ । यद्यपि यस गाउँमा कुकुर मार्ने हल्ला यति चाँडो समाप्त नहुन सक्छ किनकि गाउँमा बेलाबेलामा यसको चर्चा हुन्छ। बीबीसी